मानवअधिकार र न्याय केन्द्र (एचआरजेसी) ले नेपालमा यातना, जबर्जस्ती बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या र यौन हिंसा जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनको पीडितहरूको न्यायको पहुँचलाई सुद्रिढ गर्छ ।
सन् २०१६ मा नेपालमा दर्ता गरिएको र काठमाडौँमा अवस्थित यस संस्था जेनेभास्थित गैर सरकारी संस्था ट्रायल इन्टरनेसनलको सहयोगमा स्थापना भएको हो । ट्रायल इन्टरनेसनलले जघन्य अपराधहरू विरुद्धका कार्यहरूमा विशेष दखल राख्दछ ।
दण्डहीनताको एक दशक भन्दा बढी
वि. स. २०५२ देखि २०६२ सम्म नेपालले शशस्त्र द्वन्द भोग्नुपर्यो । त्यसकाल खण्डमा दुवै पक्षबाट यातना, यौनजन्य हिंसा, जबर्जस्ति बेपत्ता र गैर न्यायिक हत्या लगायतका कयौं संख्यामा मानव अधिकार हननका घटनाहरू भए । द्वन्द समप्त भएको एक दसक बितिसक्दा पनि पिडितहरूलाई न्यायमा पहुँचका लागी ज्यादै कठिनाई परिरहेको छ ।
लामो अवधि भईसकेको र प्रक्रियाहरूको जटिलताका कारण कयौं पिडितहरू निरुत्साहित भएका छन् भने कतिपय चाहिँ आफ्ना अधिकारका ’boutमा नै जानकार हुन पाएका छैनन् । केहि भने आवाज उठाउँदा थप खतरामा पो परिने हो कि भन्ने त्रासमा छन् ।
परिणामस्वरूप दशौँ हजार नेपालीहरू न्यायको पर्खाईमा रहेका छन् । उनीहरूले त्यतिबेला मात्र यथार्थमा आफ्नो अधिकार हासिल गर्नेछन् जब देशले दिगो शान्ति स्थापना गर्दछ ।
संस्थागत दाताहरूको अपार सहयोगबिना एचआरजेसीको स्थापना हुन सक्दैनथ्यो । हामी खासगरी नेपालस्थित वैदेशिक एवं कमनवेल्थ कार्यालयहरु र जर्मन राजदुतावासप्रति आभारी छ।
खोजपूर्ण र सहभागितामूलक विधि
एचआरजेसीले कुनै पनि पीडितलाई उसको पृष्ठभूमि, वा धार्मिक वा राजनैतिक आवद्धता उपर तटस्थ रही निःशुल्क कानुनी सहयोग तथा प्रतिनिधित्वको सेवा प्रदान गर्दछ ।
नेपालका योग्य र विश्वसनीय मानवअधिकार कानुन व्यवसायीहरुको सञ्जाल मार्फत यसले दोषीलाई सजायँको दायरामा ल्याउन एवं पीडितलाई न्याय
र परिपूरण दिलाउन स्वदेशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मुद्दाहरु लड्दछ । एचआरजेसीले विस्तृत कानुनी परिदृश्य उजागर गर्न र जवाफदेहीताको प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी तवरले कानुनको उपयोग गर्दछ ।
सबै मुद्दा÷घटनाहरु यसले सूचीकृत गरेका उत्कृष्ट कानुन व्यवसायीलाई सुम्पनु अगाडि एचआरजेसीले संकलन र अनुसन्धान गर्दछ । त्यसपछि मानव अधिकारका विषयमा दक्ष एचआरजेसीका एकजना कानुनी सल्लाहकार सम्बन्धित घटना÷मुद्दाको पूरै प्रक्रिया अवधिभर संलग्न भइ रहन्छन् जसमा त्यसका लागि नियुक्त कानुन व्यवसायी र पीडितको पनि सहकार्य रहन्छ ।
क्रियाशील सबैलाई सबल बनाउने
एचआरजेसी नेपालका न्यायिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरुबीच मानवअधिकार संस्कृति निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दछ । तसर्थ, यसले कानुन व्यवसायीहरुलाई विशिष्टिकृत ढंगको प्रशिक्षण तथा कोचिंङ्गहरु गर्नुका साथै डकुमेन्टेसन (दस्तावेजीकरण) र मुद्दा दायर गर्ने जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्दछ ।
त्यसका अलावा पीडितहरुलाई न्यायिक प्रणालीको निटक पुर्याउन उनीलाई सवल बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण काम हो, जसका लागि एचआरजेसी पीडितहरुको लागि सवलीकरण कार्यशालाहरु आयोजना गर्ने गर्दछ, ता कि उनीहरुले आफ्नो अधिकारको ’boutमा अझ बढी बुझ्न सकुन् र ती प्रक्रियाहरुमा थप संलग्न हुन सकुन् ।
वृहत्तर सहकार्यलाई प्रोत्साहन
संरचनागत तहहरुमा पनि परिवर्तन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा एचआरजेसी विश्वास गर्दछ । तसर्थ यसले राष्ट्रिय निकायहरुसँग निष्पक्ष कानुन र नीतिहरुका लागि पक्षपोषण (लविङ्ग) गर्दछ । त्यस काममा यसले खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार निकायका निर्णयहरु कार्यान्वयन गराउन जोड
दिने गर्दछ ।
सो उद्देश्य हासिल गर्न एचआरजेसी नेपाल र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कयौँ साझेदारहरु जस्तै गैर सरकारी संस्था, कुटनीतिक नियोग र विज्ञ व्यक्तिहरुसँग सहकार्य गर्दछ । ती सबै मिलेर नेपालमा विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहीनता विरुद्ध अझ प्रभावकारी तवरले लड्नका लागि समन्वयात्मक कार्य योजना तयार गर्दछन् ।
एचआरजेसीमा केवल नेपाली कर्मचारीहरु मात्र रहेका छन् । यसको रोस्टरमा रहने हरेक अधिवक्ताहरुको चयन उनीहरुको योग्यता र मानव अधिकारप्रतिको योगदानलाई आधार बनाई सुझवुझपूर्ण तरिकाले गरिन्छ ।
राजश्री विष्ट शाक्य
आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकृत
राजश्री सन् २००८ देखि विभिन्न कम्पनी र गैर–नाफामूलक संस्थाहरुमा आर्थिक व्यवस्थापकको रुपमा कार्य गर्दै आउनुभएको छ । वहाँले आफ्ना ग्राहक संस्थाहरुलाई उनीहरुको लेखा तथा आर्थिक रिपोर्टिङ्ग प्रणाली विकास गर्न परामर्शदाताको काम पनि गर्नुभएको छ । राजश्रीले बीए र वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ ।
“विश्वसनीयता हासिल गर्नका लागि पारदर्शी आर्थिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन चाहिन्छ । मेरो पदीय जिम्मेवारी मार्फत् म त्यस्तो भरपर्दो वातावरण तयार गर्न योगदान पुर्याउनेछु जहाँ पीडितहरु सुरक्षित र गोपनीय तवरले खुलस्त हुन सकुन् ।”
मानव अधिकार संयोजक
रञ्जिताले एचआरजेसीको स्थापनाको लागि सन् २०१६ देखि ट्रायल इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो । त्यसअघि वहाँ नेपालमा सुशासन, मानवअधिकार संरक्षण र कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा अनुसन्धानकर्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । रञ्जिताले काठमाडौँ स्कुल अफ ल बाट एलएलबी र एलएलएम गर्नुभएको छ ।
“पीडितहरुसँगको सहकार्यमा काम गर्न ज्यादै उत्साह जाग्दछ । उनीहरुमध्ये अधिकांशले अतुलनीय उदारता प्रर्दशन गर्दछन् । त्यस्ता साहसी र आदरणीय व्यक्तिहरुसँग सहकार्य गर्न पाएकोमा म गौरवान्वित भएको छु ।”
मानव अधिकार अधिकृत
सलिनाले यसअघि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ र १८२० मा आधारित ‘शान्तिका लागी महिला सशक्तीकरण’ नामक परियोजनामा परियोजना समन्वयकको रूपमा काम गर्नुभएको थियो । त्यसका साथै उहाँले काठमाडौँ स्कूल अफ लमा मानव अधिकार र सुशासन सम्बन्धिको परियोजनामा कानूनी अनुसन्धानकर्ताको रूपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । यस बाहेक इन्हुरेड इन्टरनेसनलका लागी लैंगिक समानता र समावेशीकरण परियोजना अन्तर्गत सहायक कानूनी सल्लाहकारको रूपमा समेत काम गर्नुभएको छ।
सलिनाले काठमाण्डौ स्कूल अफ ल बाट एलएलबी र एलएलएमको अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ ।
” पीडितको न्यायसम्म को पहुँच सम्भव भएका हरेक तवरले बलियो बनाउनु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो र सोको लागी मेरो ह्युमन राइट्स एंड जस्टिस सेन्टर संगको संलग्नतामा म अत्यन्तै सन्तुष्ट छु।”
कपिलले एक दशक भन्दा लामो अवधिसम्म मानव अधिकार, फौजदारी न्याय र साक्षी सुरक्षाका विषयमा कार्य गर्नुभएको छ । काठमाडौँ स्कुल अफ ल मा एसोसिएट प्रोफेसर रहनुभएको वहाँले नेपालमा निष्पक्ष सुनुवाईका मापदण्ड, बालबालिकाहरुको अधिकार र मानव बेचविखन सम्बन्धी विस्तृत अनुसन्धानहरु प्रकाशित गर्नुभएको छ ।
एचआरजेसीको अध्यक्षको नयाँ जिम्मेवारी लिनु अघि यस संस्थाको पहिलो एक वर्ष कपिल निर्देशक हुनुहुन्थयो ।
“मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र पीडित र अधिवक्ता दुवैथरीलाई सवल तुल्याउने एक विशेष परियोजना हो । उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्नका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुलाई जोड्नमा हामी सहकार्यको विधिमा विश्वास गर्दछौँ ।”
“न्याय प्राप्त गर्ने एकमात्र तरिका हो जुन म बन्द गर्न सक्छु। यसले के भयो भन्ने मेटाउन छैन, तर यसले मलाई मेरो दिमाग फिर्ता ल्याउनेछ।”
“HRJC सँग काम गरेर, मैले मानव अधिकार दुर्व्यवहारको पीडितहरूको लागि कंक्रीट अंतर बनाएको छु। उनीहरूको कानुनी सल्लाहकारहरूले कोइरालालाई साँच्चै मेरो विश्वास बढायो।”
वकील र HRJC को सदस्य
“मानव अधिकार तथा न्याय केन्द्र पीडित र अधिवक्ता दुवैथरीलाई सवल तुल्याउने एक विशेष परियोजना हो । उत्कृष्ट परिणामा हासिल गर्नका लागि स्थानीय व्यक्तिहरुलाई जोड्नमा हामी सहकार्यको विधिमा विश्वास गर्दछौँ ।”
के तपाईं मानव अधिकार दुर्व्यवहारको पीडित हुनुहुन्छ?
यदि तपाइँ वा तपाईंका नजिकका व्यक्तिहरूले तपाईंको अधिकारको कष्ट उल्लङ्घन गरेका छन् भने, सिभिल संघर्षको बेला वा पछि, हामी मद्दत गर्न सक्नेछौं।
HRJC मा, तपाइँ एक अनुभवी कानुनी सलाहकारसँग नि: शुल्क शुल्क र कडा गोपनीयतामा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको सुरक्षा र कल्याणका लागि सुरक्षा उपाय सहित, कुन किसिमका समर्थनलाई विचार गर्न सकिन्छ तुरुन्तै तपाईँलाई बोलाइनेछ।
तपाइँका इच्छाहरु र आवश्यकता अनुसार अनुसार सबै चरणहरू तपाईंको साथमा निर्णय गरिनेछ।
ह्युमन राइट्स एन्ड जस्टिस सेन्टर
(एसियन कलेज अफ साईन्स एण्ड टेक्नोलोजीको नजिक)
+९७७ ९८१८ ०१८ ९२४